१५ गतेदेखि यी जिल्लामा कर्फ्यू जारी गर्ने सीसीएमसीको निर्णय ! हेर्नुहाेस् – हाम्रो देश
१५ गतेदेखि यी जिल्लामा कर्फ्यू जारी गर्ने सीसीएमसीको निर्णय ! हेर्नुहाेस्
१५ गतेदेखि यी जिल्लामा कर्फ्यू जारी गर्ने सीसीएमसीको निर्णय ! हेर्नुहाेस् । को- भिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले पाँचसय भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा १५ गतेदेखि निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्नेछ त्यसका लागि सिफारिस गर्ने सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ । सीसीएमसी सदस्य समेत रहनुभएका बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिएको जानकारीअनुसार १५ गतेदेखि निषेधाज्ञा लाग्नेछ । सीसीएमसीको आजको बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ ।
भोली नै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर यो निर्णय लिनेछ । बैठकले सोमबारदेखि सुरु हुने सबै परीक्षाहरु स्थगित गर्न सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले परीक्षाहरु स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सीसीएमसी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।